La-socodka gulukoosta dhiigga | Monitoring blood glucose
English: Monitoring blood glucose
Baadhitaan joogto ah ayaa kuu sheegi doonaa sidacuntadaadu, firfircoonida jidhka iyo dawadu ushaqeynayaan. Baraha sonkorowga ayaa ku tusi kara sidaloo sameeyo baadhitaanka oo kaa caawin kara wakhtiyadaugu fiicaan inaad baadhid.
Heerarka gulukoosta dhiigga ee lagu taliyay:
Ka hor cuntada
Ka dib cuntada
Tiro u dhexeysa 80 ilaa 130 mg/dL
2 saacadood ka
dib cuntada: wax ka yar 160 ilaa 180 mg/dL
Tiro u dhexeysa 100 – 140 mg/dL
Baadh gulukoosta dhiiggaaga:
Ka hor quraacda
Ka hor qadada
Ka hor cashada
Ka hor wakhtiga hurdada
Ka dib quraacda
Ka dib qadada
Ka dib cashada
Waxa muhiim ah in aad baadhid gulukoosta dhiiggaaga,xiitaa haddii aad wacnaan dareensan tahay, iyo in heerarkagulukoostaada ahaadaan gudaha tirada fiican.
Baadhitaanada joogto ah ee A1c
A1c waa baadhitaan muujinaya celceliska heerka gulukoostadhiigga intii lagu jiray 2-dii ama 3-dii bilood ee tagay. Cilmibaadhisayaa muujisay in waxyeelada ku dhacda indhaha,kelyaha iyo dareemeyaasha ay toos ula xidhiidho heerkaA1c.
Baadhitaanka ah durista farta ee gulukoosta dhiigga siweyn buu u leeyahy qiime marka la fiiriyo maamulistasonkorowgaaga ee ah saacad-ka-saacad ama maalin-kamaalin.Laakiin heerka A1c ayaa sawir guud ka bixinayaxadeynta sonkorowga iyo halistaada cilado. Waxa aadu baahan tahay labada nooc ee baadhitaan si loo helomaamulis sonkorow oo waxtar leh.
Waxa laga yaabaa in bixiyahaaga daryeel caafimaad u kusiiyo natiijooyinkaaga A1c iyaga oo ah celcelis gulukoos oola qiyaasay (estimated average glucose) (eAG) halkii ay kaahaan lahaayeen boqolley. eAG waxa lagu cabbiraa mg/dL, oo ah waxa aad u baratay inaad ku aragtid mitirkaaga. Isticmaal shaxda hoos si aad u fahamtid natiijooyinka aga baadhitaanka A1c.
Sawirkani waxa uu is barbardhigayaa natiijooyinka A1c iyo natiijooyinka eAG, oo loo sheegayo habka mg/dL.
Barnaamijka sonkorowga ee Allina Health wuxu kutalinayaa:
baadhitaan A1c oo ah ugu yaraan laba jeer sannadkii, oointaas ka badan haddii natiijooyinka baadhitaanku kasareeyaan hadafka baadhitaankaaga
hadaf baadhitaan oo ka yar 7 boqolkiiba
Gulukoosta dhiiggaaga ku jirta ayaa ku dhegtahiimogolobiinta ku jirta unugyada cascas oo halkaas kunagaata. Unugyada cascas ee dhiiggu waxay noolaadaanqiayaastii 120 maalmood. Marka gulukoosta dhiiggaagusare u sii kacdaba, gulukoos sii badan ayaa ku dhegaysahiimogolobiinta. Baadhitaanka A1c wuxu cabbirayaaboqolkiiba inta hiimogolobiin ee gulukoos ku dhegsan tahay (oo la yidhaahdo hiimogoloobiin beddelmay).
Natiijooyinka baadhitaanda A1c ee sareeya
Haddii natiijooyinkaaga baadhitaanka A1c sareeyaan, adigaiyo bixiyahaaga daryeel caafimaad ayaa u baahan inaadka wada shaqeysaan sidii hoos loogu dhigi lahaa heerkagulukoostaada. Waxa laga yaabaa in bixiyahaaga daryeelcaafimaad ku taliyo isbeddelo qorshe daweyn sida:
dawooyinka ka duwan kuwii hore
qorshe cunto ka duwan kii hore
firfircooni jidh oo sii badan
tababar ah yareynta giigsanaanta ama istareeska
booqashooyin daryeel caafimaad oo intii hore ka tirobadan
A1c-kaaga oo aad hoos u dhigtid xiitaa 1 boqolkiiba waxayyareyn kartaa halistaada cilado sonkorow 30 boqolkiiba.